သနပ်ခါးမေ: August 2014
Look taller without ဒေါက်
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:19 AM ဖက်ရှင်
ဒေါက်စီးလိုက်ရင် အရပ်လည်းမြင့် ခြေတံလည်း သွယ်သွယ်လှလှလေးဖြစ်သွားပေမယ့် ဘယ်သွားသွား ဒေါက်အမြဲတမ်း ဝတ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးလေနော်။ ဒီတော့ အရပ်မြင့်တယ် ထင်ရအောင် တခြား ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲကြည့်ရအောင်။
Fitting လေးတွေ ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ ကွက်တိ ချုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ ရွေးဝတ်ပါ။ လွင့်လွင့် ပွပွ အင်္ကျီ၊တွေ Maxi လို စကတ်အရှည်တွေ၊ ခါးနေရာမှာ ရှုံ့ထားတဲ့ ဂါဝန်ပွပွတွေက အစကတည်းက မမြင့်တဲ့လူကို ပုံပုံလေး ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်မဟုတ်ပဲ flat တို့ ကြိုးသိုင်းတို့ ဝတ်မယ်ဆိုရင် အရောင်နုနု ဒါမှမဟုတ် အသားရောင်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အရောင်လေးတွေ စီးပါ။ စီးတဲ့ အရောင်နဲ့ ခြေထောက်အသားရောင်နဲ့ တသားတည်းကျသွားတဲ့ အခါ ခြေထောက် အပိုင်းကို ပိုရှည်သယောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ Boot ဖိနပ်တွေ ဝတ်မယ်ဆို ခြေကျင်းဝတ်နားလောက်လေးတွေ ရွေးချယ်ပါ။ Boots အရှည် မဝတ်ရဘူးရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဝတ်မယ်ဆို အပေါ်က စကတ်ကို လိုက်တိုပေးနိုင်သလားပေါ့နော်။
စကတ် / ဘောင်းဘီ တိုတိုဝတ်ရင် ခြေထောက်သား ပိုပေါ်တဲ့ အတွက် ပိုသွယ်တဲ့ ပုံဖြစ်စေတာမှန်ပေမယ့် အသက်ကလေး ရလာတဲ့ အခါ စကတ်တိုတိုနဲ့ အဆင်ပြေမလာတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါကျ ရင် ဒူးအကျော်လေးလောက်ရှိမယ့် A-line / pencil စကတ်လေးတွေ ဒါမှမဟုတ် အပြင်က အပါး အထဲက နည်းနည်း ပိုထူတဲ့စကတ်မျိုး ဝတ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ခြေထောက်လေးတွေကို အိနြေ္ဒရရနဲ့ ကြွားပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
အပေါ်အင်္ကျီကို အထဲထည့်လို့ ၊ အင်္ကျီခါးတိုလေးတွေနဲ့တွဲဝတ်တဲ့အခါ ခါးနေရာက အပေါ်ရောက်သွားပြီး ခြေတံက အလိုလို ရှည်သွားသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
ဘောင်းဘီ အတွက်ဆို အတိုဝတ်ဖို့အဆင်မပြေရင် ခြေကျင်းဝတ် အထက် ကွာတား လေးတွေက ကူညီပေးပါမယ်။ ဘောင်းဘီနဲ့ ခြေကျင်းဝတ်ကြား အသားနည်းနည်းမြင်ရတာက ကြည့်တဲ့သူရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ကွာတားမဝတ်ချင်တဲ့အခါ ဘောင်းဘီအရှည်ကို ခေါက်လို့ စတိုင်လ်ထုတ်လို့ရတာပဲနော။
မိန်းကလေးတိုင်းက သူ့အလှနဲ့သူရှိကြတာပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အပြင်အဆင်ကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ အများအမြင်မှာ စတိုင်လ်ကျတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရှိတာပေါ့နော်။
August လကုန်ပိုင်းရောက်ပြီဆို ရိုးရာအစဉ်လာ မပျက် ဘလော့ဒေးလေး ကျရောက်လာပြန်ပြီပေါ့နော်။ မြတ်ကြည် ညွှန်းပေးချင်တဲ့ ဘလော့ဂါ အသစ် က ညီမလေး မြတ် (Ash) ပါ။ http://ashleymyat.blogspot.com
ပုံမှန် စာဖတ်သူတွေရှိခြင်းက မြတ်ကြည်အတွက် အမောပြေစေတဲ့ ဆေး တစ်ခွက်ပါပဲ။ Pageviews နဲ့ facebook likes လေးတွေက လိုင်းပေါ်တက်တာနဲ့ ပထမဆုံး ကြည့်ဖြစ်တာတွေပေါ့။ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ ဟိုမှာတုန်းကလောက် အားထည့် မရေးနိုင် ပေမယ့် ဘလော့လေး အပေါ် သံယောဇဉ်တွေ တွယ်နှောင်ပြီးရင်း တွယ်နှောင်ဆဲပါပဲ။ ဘလော့လေး စ ကတည်းက စ လို့ ဘလော့လေးကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အချိန်တခုထိ ဖျက်ခဲ့လိုက်ရတဲ့အချိန် တစ်နှစ်နီးပါးကြာမှ ခြေလှမ်းပြန်အစပျိုးခဲ့ရတဲ့အချိန် အခုချိန်ထိ အားပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းယောင်းမများကို ရင်ထဲကနေ အထူး ကျေးဇူးပါလို့။
Happy Blog Day 2014 :)
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:37 AM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
Waist trainer ဖြစ်တလဲ corset
Corseting ဆိုတာ ဝိတိုရိယခေတ်က ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ အစကတည်းက အရွယ်ရောက်တဲ့ အခါ ခါးသေးအောင် သားရေပြား အပတ်ကို ကျိုးနဲ့တင်းနေအောင် ချည်ကြတဲ့ နည်းပေါ့။ အခုနှစ်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန် မလုပ်ပဲ ခါးသေးရင်ချီ ခန္ဒာကိုယ်ကို ရဖို့ corset/ waist trainer ကို အသုံးပြုတာ ပြန် ခေတ်စားလာပါတယ်။
Jessia Alba နဲ့ Beyonce တို့လို celebrities တွေ ကလေးမွေးပြီး နောက်ပိုင်း ခါးကို နဂို အတိုင်း ပြန်ချချင်တဲ့အခါ corset ရဲ့ အထောက်အကူ ယူတယ်လို မဂ္ဂဇင်း တချို့က ဆိုကြပါတယ်။
တချို့က ဝပြီး ခါးတုတ်တာ တချို့က မဝပဲ ခါးတုတ်တာ ( နံ ရိုး ခွင် ကျယ်နေတာ) မျိုးရှိပါတယ်။ ကျပ်စည်းထားလိုက်တဲ့ အခါ အဲဒီနေရာ အဆီကောင်းကောင်းမစုနိုင်တော့သလို အရိုးခွင်ကလည်း အထဲကို ကျုံ့သွားပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ စစချင်းမှာ စည်းတုန်းပဲ ခဏ ခါးသေးပြီး ပြန်ဖြုတ်တဲ့ အခါ အရိုးခွင်က elastic recoil နဲ့ နဂိုနေရာပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ ကြာသွားတဲ့ အခါမှာ အသားကျသွားပြီး ဖြုတ်လိုက်ရင်လည်း နဂိုနေရာ ပြန်မရောက်တော့ပါဘူး။
စစ တပ်တပ်ချင်း ကို ၃ ၄ နာရီ လောက် ဝတ်၊ ပြန်ချွတ်။ တဖြည်းဖြည်း ဝတ်တာနေသားကျတဲ့ အခါ နာရီတွေ တိုးသွားရပါတယ်။ အလားတူပဲ အနောက်က ကြိုးတွေကို တဖြည်းဖြည်း လိုချင်တဲ့ ခါးဆိုက် ရအောင် တင်းတင်း ပေးသွားရပါတယ်။ ကိုယ့်ခါးအတိုင်း ရဲ့ ၃ လက်မ စာ လျော့ပြီး ဝယ်ရတယ်။ ခါးဆိုက် ၃ ခုစာလျော့ဖို့ ၆ လ က နေ ၁ နှစ်လောက်ထိ အချိန်ပေးရပါတယ်။
အခုတလော waist trainer ဝတ်ပြီး selfie ရိုက်တာလေးတွေ ခေတ်စားနေတယ်။
ဒီလောက် လှအောင် လုပ်တဲ့နည်းကို ရှေးခေတ်ကနေ ဘာလို့ ဆက်မသုံးကြလဲ လို့မေးကြရင် အစောပိုင်း ဖြေရှင်းချက်ကိုကြည့်တဲ့ အခါ သူ့ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ တပ်တဲ့ အခါ အထဲက ကလီစာတွေကို ဖိထားသလိုဖြစ်ပြီး အဆုတ်ပြန့်ကားတာကို ဟန့်တားလို့ အသက်ရှူမဝတာ ဖြစ်နိုင်သလို အူ နဲ့ ကျောက်ကပ်နဲ့ ဆီးအိမ်ကို ဆက်တဲ့ ပြွန်ကို ဖိမိတဲ့ အခါ ဝမ်းချုပ်တာတို့ ကျောက်ကပ် ထိတာတို့ ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
အဲဒီလို မဖြစ်စေဖို့ တခါတည်း ကြပ်မပစ်ပဲ တဖြည်းဖြည်းချင်း တင်းသွားပေးရင်း တစ်ရက်ကို မဝတ်ပဲ ၂ နာရီ လောက် လွှတ်ပေးထားရပါတယ်။
မြတ်ကြည်နဲ့ waist trainer
မြတ်ကြည်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဝဝ ပိန်ပိန် ခါးတ တစ်တောင့်တည်း။ မမ အိုင်အိုရာကို ပြောဖူးမယ်ထင်တယ်။ ခါးဆိုက် ၂၈ က မကျဘူးဆိုတာလေ။ အရိုးကိုက ကြီးနေတာ။ အခုဝတ်နေတာ waist trainer အစစ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ခါးပတ်တာကို ချိတ်လေးတွေနဲ့ ။
အထဲမှာ ကြိုးတချောင်း အင်္ကျီခံပြီး နေ့တိုင်း ဝတ်ဖြစ်တာ ၃ လထဲရောက်နေပါပြီ။ အခုခါးဆိုက် က ၂၆ မရောက်ချင်ရောက်ချင်။ တစ်ရက်လောက် ချွတ်ထားလည်း ပြန်တော့ မတက်လာတော့ဘူး။ ၂၅ လောက်ထိလုပ်မယ်လို့ တော့ စိတ်ကူးထားတယ်။ တကယ့် waist trainer ရှိရင် ဝယ်ချင်တယ်။ ရန်ကုန် မှာ ဘယ်နေရာက ဝယ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေလို့။ သိရင် လက်တို့ပေးပါဦး။
အရင်လ annual staff party မှာ ရိုက်ထားတာ။ :)
(ခါးဆိုက် ၂၇ ဝန်းကျင်)
အခုက စမ်းသပ်ကာလထဲမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ Waist trainer နဲ့ အတူ healthy diet ရယ်၊ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလေးရယ် တွဲလုပ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးက ကိုယ်လုံးလှချင်တဲ့ မြတ်ကြည်တို့လို ခန္ဒာကိုယ် တတောင့်တည်း ဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
လက်သည်း step by step tutorials
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:24 PM လက်​သည်း ( nail art )
ပို့စ်တွေ သိပ်ခြား သွားမှာစိုးလို့ လက်သည်းအလှပြင်တာ သဘောကျတဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် ဒီ application လေး လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်နော်။ ပို့စ် အသစ် မတင်နိုင်ခင် ကြားဖြတ်ပေါ့။ ဖုန်းထဲ down ထားလိုက်ရုံပဲ။ :)
အထဲမှာ ဒီလို တစ်ဆင့်ချင်း step by step ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားတယ်။
(အသူတို့ အကြိုက် ^^)
ကောင်းတဲ့ အချက်က ဒီဇိုင်း ၂၅၀ တောင်ထည့်ပေးထားတယ်။
မကောင်းတဲ့ အချက်က size ကြီးတာရယ် (12 MB တောင်) လိုက်လုပ်မယ်ဆို nail tools (eg. dotting tool) လေးတွေ ဘာလေးတွေတော့ လိုတာပေါ့နော်။
နာမည်လေးက - Nails Step by Step Tutorial
https://play.google.com/store/apps/details?id=my.nailsteps မှာ Android တွေ အတွက် သွား download လို့ရပါတယ်နော်။
Logo လေးက ဒီပုံလေး ...
အခုတလော မြတ်ကြည် ကွန်ပျူတာ ခုံရှေ့ကို မရောက်နိုင်တာ တော်တော်ကြာပြီ။ ရေးချင်တာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အချိန်မရတာရယ်၊ အလုပ်ချိန်ပြောင်းသွားတာရယ်နဲ့ ဘလော့လေး ဘက် ကို မလှည့်နိုင်ဖြစ်နေတာ။
ရေးရေး မရေးရေး ပုံမှန် လာရှာဖတ်ကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေး တစ်ရက်ဖြစ်ပါစေရှင်။
Please visit my page for more thanakharmay beauty updates :)
Tag posts (5)
Website လမ်းညွှန် (13)
မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup (21)
မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ (21)
လက်​သည်း ( nail art ) (17)
အစားစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း (Diet and Exercise) (16)
အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း (21)
တိုက်နံပတ် ၁၉၃က မိန်းမ
အရေးကြီးတဲ့ သံယောဇဉ် နဲ့ နားလည်မှု
Burglish (Myanglish) to Burmese မြန်ဂလိပ် မှ အင်္ဂလိပ် ကို ပြောင်းချင်ရင်
စိတ်ကူးနဲ့၂၀၁၀ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပွဲတက်ဝတ်စုံ တွေကို အမှတ်ပေးကြည့်ရအောင်
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း နဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
ဝက်ခြံ ဝက်ခြံ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့
အမွေး ပြဿနာ :P
ဆံပင် အတို for 2014
ဝက်ခြံ ပျောက်ကင်းမယ့် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းလေး
@thanakharmay. Powered by Blogger.
Copyright © 2014 သနပ်ခါးမေ | Published By Gooyaabi Templates